कसरी स'म्प'र्क गर्दा बच्चा बस्छ, बाँ'झोप'नाबाट कसरी बच्ने ? डा. सबिना सिम्खडाको सुझाब - दैनिक नेपाल न्युज
बिहे गरेको एक बर्ष सम्म पनि कुनै पनि अस्थिाई साधनको प्रयोग बिना शा’रि’रक स’म्प’र्क गर्दा बच्चा बसेन भने बाँ’झोप’ना हुने डा. सिम्खडा बताउँछिन् । उमेर जति बढ्दै गयो उत्तिकै बा’झोप’ना हुने संभावना हुन्छ । उमेरको हकमा ३० बर्ष माथि अझ बढी जोखिम हुने संभावना रहन्छ । दैनिक जस्तो शा’रि’रिक स’म्प’र्क गर्दा वा म’हि’नावारी भएको १० देखी २० दिन भित्र स’म्प’र्क हुँदा पनि बच्चा बसेन भने तुरन्त सम्बन्धीत चिकित्सकलाई देखाउन उनी आग्रह गर्छिन् ।
पहिले नेपालका बिरामीहरु भारत जान्थे तर अहिले भारतबाट बा’झोप’नाको उपचार गर्न नेपाल आउने गरेको डा. सबिनाको अनुभव छ । उनको क्लिनिकमा पनि धेरै भारतीयहरु आएर सेवा लिएका छन् । हामीले उनी प्रजनन् बिशेषज्ञ डा. सबिना सिम्खडासंग बाँ’झोप’ना र प्रजननको बिषयमा कुराकानी गरेका छौं । हेरौ यो कुराकानी..
ट्र्याक्टर पल्टिँदा बाबुको मृत्यु, छोरा घाइते